प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद छाड्न ओलीको चुनौति (पूर्णपाठसहित) - नेपालबहस
प्रचण्डलाई अध्यक्ष पद छाड्न ओलीको चुनौति (पूर्णपाठसहित)
४ मंसिर २०७७ | ८:५८:४९ मा प्रकाशित
४ मंसिर, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा नेकपाका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रचण्डलाई पनि अध्यक्ष पद छाड्न चुनौति दिएका छन् । आफूलाई दर्जनौ आरोप लगाएपछि ओलीले प्रचण्डमाथि असफल भए दुवै अध्यक्ष असफल भएको भन्दै पद छाडेर देखाउन चुनौति दिएका हुन् ।
बुधबारको सचिवालय बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले आफूले पद छाडे अध्यक्ष प्रचण्डले पनि पद छाड्नपर्ने बताएका हुन् । आफूलाई दिन दिनै पद छाड भन्नुपर्ने, अनि प्रचण्डलाई पनि पद छाड भन्यो भने के हुन्छ ? भन्दै ओलीले नेताहरुलाई हेरेर प्रतिप्रश्न गरेका थिए ।
उनको प्रश्नको कसैले पनि जवाफ दिएनन् । बुधबारको सचिवालय बैठकमा प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले पुरानै प्रश्न दोहोर्याएका थिए । सोही प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलै लामै कुरा गर्ने क्रममा सो प्रश्न गरेका हुन् ।
आफ्ना कारण मात्रै पार्टी एकता र सरकार सञ्चालनमा समस्या नआएको प्रधानमन्त्री ओलीको टिप्पणी छ । बुधबारको सचिवालय बैठकले ओलीलाई पनि प्रतिउत्तर प्रतिवेदन पेश गर्ने अधिकार दिएको छ । यस्तै मंसिर १८ गते स्थायी कमिटी र मंसिर २५ गते केन्द्रिय कमिटी बैठक बोलाउने निर्णय गरेको छ ।
नेकपाका अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मंसिर ३ गते सचिवालयमा राखेको भनाई:-
त्यस बाहेक त्यसै दिन एउटा प्रस्ताव भनेर अर्का अध्यक्षले मलाई दिनुभयो, अरू सदस्यलाई पनि बाँड्नुभयाे । त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन । बैठकमा प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने हाम्रो विधि भिन्नै छ । एउटा अध्यक्षलाई जानकारी नभइकन अर्का अध्यक्षले कुनै पनि प्रस्ताव ल्याउन मिल्दैन । त्यस्तो दिनुपर्ने पनि कुनै अवस्था आउला तर अर्का अध्यक्षलाई जानकारी नै नदिइकन, अर्का अध्यक्षमाथि हमला, प्रहार, आलोचना, आरोप र अभियोग सहितको प्रस्तावका नाममा अचानक त्यो मलाई दिनुभयो । अरू साथीलाई पनि वितरण गर्नुभयो तर त्यो बैठकमा प्रस्तुत भएको प्रस्ताव होइन ।
मैले अस्ति दुई कमरेडलाई बोलाएर कुरा गरेँ, वामदेवजीसँग कुराकानी गरेँ । यसको छिनोफानो नभइकन, यी आरोपसहित, यी आरोप बोकी बोकीकन कोही पनि मानिस अध्यक्ष वा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा बस्न त मिल्दैन । यी आरोप या त त्यसबाट बदर हुनुप-यो तब प्रधानमन्त्री र अध्यक्षको जिम्मेवारीमा बस्न मिल्छ । त्यसो होइन भने सदर हुनुप-यो र ती पद र ती जिम्मेवारीबाट हट्नुप-यो ।
यो हटाउने माग त पहिलेदेखि आएकै थियो । यसपटक हट्ने आधार यी हुन्, यसकारण हट्नुपर्छ भन्ने कुरा पनि आएको छ । पहिले जस्तो यसमा सोझै प्रधानमन्त्रीबाट हट, अध्यक्षबाट हट भन्ने भाषा छैन, त्याग गर्नुपर्छ भन्ने कोटेड भाषा रहेको छ । त्याग भन्ने शब्द त्यहाँ राखिएको छ । यस सम्बन्धमा पहिले छिनोफानो हुनुपर्छ । यो आरोप या त सदर ठहरिनुप-यो अनि प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष हट्नुप-यो । यो आरोप सही ठहरिँदैन भने यस्तो आरोप लगाउनेले यसको जिम्मेवारी लिनुप-यो, यसको जवाफदेही लिनुप-यो ।
म के भन्छु भने, मिलेर मात्रै पार्टी बचाउन सकिन्छ । लडेर पार्टी बच्दैन, जालझेल र तिक्डम गरेर पार्टी बच्दैन । गुटबन्दी गरेर पार्टी बच्दैन । सबै कुरामा पछि छलफल गरौंँला । आज म त्यो लाञ्छना पत्र, जो मलाई दिइएको थियो, त्यस पत्रका सम्पूर्ण आरोप, अभियोग, लाञ्छना, तिरस्कार, अपमान सबै खारेज गर्छु । यो मेरो राजनीतिक जीवन नै सिध्याउने गरी ल्याइएको आरोप पत्रलाई म पूर्ण रूपमा अस्वीकार गर्छु । त्यसको यथोचित जवाफ म लिखित रूपमा नै प्रस्तुत गर्नेछु । मैले त्यो पत्रले परिस्थिति अलिक गम्भीर मोडमा पु-यायो भनेर माधव कमरेडलाई भनेँ ।
उहाँले अँ धम्क्याउने ? धम्क्याएर कोही डराउँदैन भन्नुभयो । अब डराउने खालको त यहाँ कोही छ जस्तो लाग्दैन । माधव कमरेड मात्रै नडराउने होइनन्, अरू पनि कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन । कोही पनि डराउँदैनन् । यस्तै राजनीति गरेर आएका मान्छे कोही डराउलान् जस्तो लाग्दैन । सबै शूरैशूरा हुँदा शूरै चाहिँ बुद्धिमत्तापूर्ण कति हुन्छ र कति हुँदैन ? फेरि पनि विचार गर्न मेरो आग्रह छ । अहिले अब बैठकमा जुन विषयमा छलफल हुनुपर्छ पहिले र निष्कर्ष निस्किनुपर्छ त्यसो नगरिकन अगाडि जान सकिँदैन । यही विषयमा छलफल गर्न म तयारीमा पुगिसकेको छैन, मेरो जवाफ पत्र पनि तयार भइसकेको छैन । मैले त्यो पत्र मसिनोगरी हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
चार गैँडा मरेकामा समितिको ध्यानाकर्षण ८ घण्टा पहिले
मापसेपछि एकापसमा कुटाकुट हुँदा एकको मृत्यु १ दिन पहिले
रत्नपार्कको नाम परिवर्तन नगर्न कमल थापाको चेतावनी १ दिन पहिले
ज्यानमारा र कारागार गएकाहरुलाई नेता नभनौं ५ दिन पहिले
तल्लो तहका प्रहरी : दैनिक १२ देखि १८ घण्टासम्म कार्य क्षेत्रमा १ दिन पहिले
बुटवलमा कोराना संक्रमित दुई जनाको मृत्यु ४ हप्ता पहिले
पछिल्लो २४ घण्टामा थप २१ जना संक्रमितको मृत्यु २ हप्ता पहिले
भोलीदेखि पोखरा महानगरको सेवा सञ्चालनमा आउने ४ हप्ता पहिले
रोगका कारण सुकेका सुन्तलाका बोट ३ हप्ता पहिले
आईपीएलमा मुम्बई इन्डियन्स प्ले अफमा पुग्ने पहिलो टिम ४ हप्ता पहिले
जर्मनीमा कोभिडका संक्रमितको संख्या पाँच लाख नाघ्यो ३ हप्ता पहिले
सङ्घीयता सफल पार्न निजामती सेवाको अर्थपूर्ण भूमिका : मुख्यमन्त्री गुरुङ ३ महिना पहिले
माइतिघर नजिकै शंकास्पद वस्तु फेला १ वर्ष पहिले
म्याग्दीमा चौध विद्यार्थी एसइईबाट वञ्चित ८ महिना पहिले
कोरोना संक्रमितको उपचार प्लाज्मा थेरापी विधिबाट गरिने ३ महिना पहिले